Iibhedi ezi-2 kunye nokuhlala kwilizwe lethu elithandekayo kwiCottage
Wood End, England, United Kingdom
Igumbi elinomnyango ophumela ngaphandle yonke sinombuki zindwendwe onguFrances
Konwabele ukuzola kokuphela kwendlwana yethu epholileyo kumaphandle amahle kwiibhedi eziMantla. Sinikezela ngamagumbi okulala ama-2 amakhulu, igumbi lokuhlambela eligcweleyo, indawo yokuhlala kunye nekhabhathi yesidlo sakusasa ukuqinisekisa intuthuzelo yakho epheleleyo! Ipatio ephangaleleyo kusetyenziswa isitiya sethu esikhulu kwezo ngokuhlwa zishushu. Siyimizuzu eli-10 ukusuka kwidolophu yentengiso yaseBedford kunye neendawo zokutyela ezilungileyo kakhulu zasekhaya. Uqhagamshelo lwezothutho olugqwesileyo ngendlela nololiwe. Indawo yokupaka ekhuselekileyo. Izinja eziziphethe kakuhle zamkelekile!
Indawo oya kuba nayo isekwe ekupheleni kwekhaya lethu, amagumbi okulala amabini anefenitshala epheleleyo kwaye atofotofo kakhulu anegumbi lokuhlambela losapho kumgangatho wokuqala. Igumbi lokuhlambela linezinto zokufudumeza ngaphantsi, indawo yokuhlambela ekhululekileyo ephindwe kabini kunye ne-cubicle yeshawari eyahlukileyo. Umgangatho wokuqala unesilingi eziphakamileyo kuwo onke amagumbi ekunika umoya othandekayo womoya kumagumbi anesisa.
Uya kufikelela kwindlu encinci nge-oki yeengcango eziphindwe kabini ukuya kwicala lendlu, kwindawo yokuhlala. Umgangatho osezantsi unezifudumezi eziphantsi komgangatho weflegi ukuze ube nobushushu kwaye ufudumale. Indawo yokuhlala ineesofa ezitulo ezibini, isitulo esinengalo kunye nesihlalo sebhontshisi. I-tv enobuchule bedijithali kunye ne-CD player kunye nerediyo ukugcina ukonwabisa. Ngaphakathi kwendawo yokuhlala kukho ikhabhathi yethu yesidlo sakusasa. Iqulethe i-microwave, ifriji, iketile kunye netoaster kunye nazo zonke izinto zokucheba, iipleyiti kunye neeglasi onokuzifuna.
Ijikelezwe ngamasimi kunye neepaddocks, indawo enoxolo ivakala ngathi uvalelwe kwindawo yakho yokuhlala yasemaphandleni, ngenzuzo yokuba yimizuzu eli-10 kuphela ukusuka kwidolophu yentengiso ephithizelayo yaseBedford. Le propathi iqhagamshelwe kwikhaya lethu, kodwa sihlala sixakeke kakhulu ngamahashe kunye nezinja ukuze singabi phezu kwakho! Sisoloko sifumaneka kuyo nantoni na onokuyifuna. Sinazo iibhayisekile ongaziboleka, ukuba uyafuna. Ezi zisusela kwiibhayisekile zabantwana (malunga ne-7 iminyaka ukuya phezulu) ukuya kwiibhayisekile ezi-3 zabantu abadala. Ikhitshi lethu linezinto zokupheka ezisisiseko kodwa kukho iindawo zokutyela ezintle kunye neendawo zokutyela ezikufutshane, sinolwazi olukhoyo!
Umbuki zindwendwe ngu- Frances
Siya kufumaneka nanini na usifuna, nceda usinike umkhwazo! :)
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Wood End